Doorashadii 2017 waxa ciil baxay siyaasiyiinta 4 beelood 2 kalana wey abaal celiyeen midnimada ummada ayaase muqadas ah!!Dr.khadar-Libaaxley. | Awdalmedia.com
Doorashadii 2017 waxa ciil baxay siyaasiyiinta 4 beelood 2 kalana wey abaal celiyeen midnimada ummada ayaase muqadas ah!!Dr.khadar-Libaaxley.
Guud ahaan faalada qormadan waxa aan ku eegi doonaa cajaa’ibta guul hanqalka la kaca , ciil baxa nabsi gaax kaltirsaday iyo ka dhaansiga laxawga kalaxa laas qadhaadh oo dhamaantood qayb ka ah ged-gedoonka waayaha iyo dareemada aadmiga dhex maaxaya ee u dhacaya qaar ka mida siyaasiyiinta beelaha somaliland; qormada tan xigta waxa aan ku eegi doonaa ( sidii beelaha gobolka Awdal ugu kala codeeyeen xisbiyada qaranka iyo duruufihii ku gadaanaa!!).
Abwaanka weyn ee murtida shilis baa waxa laga hayey:
Nin ku yidhi sinaan mayno
Adiguna buri sarayntiisa
Sadka waad wadaagtaane
Ma sagaashan baa tiisu…..
Waxay ahay doorasho nooceeda farsamo yahay taariikhda midii u horeysay qaarada afrika ee ka qabsoonta somaliland jawi degan oo nabad iyo tanaasul ku dheehanyahayna ku dhamaatay.
Waxay ahayd doorasho ay ka qayb qaateen dhamaan qaybaha bulshada idil ahaantood (culimada diinta mooyaane); waxay ahayd doorashadii oogta ololeheeda la shiday xirfad iyo xeelad kasta oo kursiga lagu hanan karo hab nabad galyo ah !! waxa aad loo shiday hanaanka habar-habarta iyo reeraysiga jeegaameysnaa oo ay bidayeen siyaasiyiintu garaacista laxanka reeraha wax aan aheyn inaan bulshada codkooda lagaga furfuri kareyn xaqiiqduna wey u badneyd sidaa!!!.
Waxay aheyd doorashadii ugu badneyd ee xataa beelaha harti ka qayb qaataan.
Waatan siday beelaha qaar u ciil baxeen kuwo kalena u abaal celiyeen :
Sawirka guud siyaasiyiinta iyo dhaqanka beelaha habar cafaan wey huq iyo ciil baxeen waxa ay ku heesayaan ( adiguba dharaaraad ka qoslaysay dhooshee amba dhamay qadhaadhkee waa inaad dhadhamisaa….) eebbada warankiina wey la heleen mudane gudoomiye c/raxman ciro , mudane maxamed cali iyo xisbigii wadani; iyada oo waliba sidaasi saddex meelood meel ahaan beelaha habar cafaan xisbiga wadani u codeeyeen.
Sawirka guud beelaha sacad muuse waxa kaliya ee maanta ka maqnaa waxa uu ahaa xil madaxweynenimo tiina wey heleen ( waxa ay qaadayaan guul ku taamnay taamnay…) iyaga iyo somaliland oo dhan rabi ha inoo kadbee.
sawirka guud gudomiye faysal cali waraabe iyo taageerayaashiisa inta ciidagale wey ku huq iyo ciil baxeen doorashadan 2017 ridada waranka ku dhacday mudane gud.c/raxman ciro iyo xisbiga wadani marka loo eego doorashadii 2003 ee daahir rayaale ku guuleystay oo macnuhu yahay intaad UDUB iyo samaroon raacayseen maxaad UCID iyo ciidagale u raaci weydeen ?? dhamaantiin maanta waxa uu faysal ku heesayaa ( adiguba dharaaraad ka qoslaysay dhooshee amba dhamay qadhaadh kee waa inaad dhadhamisaa…) mar hadii aynu wada dhacnay hada ayeynu ka sheekaysan karnaa garxajis mideysan oo isku siyaasad ah; libaax dhardaday/ qoyey dacawaa la moodaayee, hada ayeynu haybin karnaa midnimo iyo wada jir guushuna jaa’is tahay.
sawirka guud qaar kamid ah siyaasiyiinta beelaha habar jeclo wey ku huq iyo ciil baxeen dooradan dhacday 2017 ; marka loo eego doorashadii 2003 oo andacoodku yahay maxaad habaryooniseey inagaa isku deegaan ah ee aad noo raaci weydeen doorashadii 2003 ??! oo aad nooga raacdeen daahir rayaale iyo samaroon !!! sidaa darteed maanta waxa aanu u abaal celinaynaa sacad muuse oo horey abaal noogu dhigtay; waa sababta codkii habar jeclo kulmiye u noqday oo ay u xeerin waayeen ( ood wadaagta iyo isku deegaan iyo gobolo noqoshada ).
sawirka guud doorashadii dhacday beelaha ciise muuse si mugleh ayey u abaal celiyeen oo waxa ay u abaal celiyeen wallaalahood sacad muuse oo horey 2ba jeer u doortay mudane madaxweyne maxamed xaaji ibraahin cigaal.
Gabagabada faalada doorashadii dhacday 2017:
Sideedaba siyaasadu waa ciyaar cadaawadeedu aad u riiq iyo godob badan; anshaxeeduse waxa weeyi hufnaan, barasho iyo bal-reeb ka asal qaata dhaqanka hufan ee ummada wada dhalatay iyo diinta islaamka; sawirka guud sax waxa ah illaalinta midnimada bulshada, sinaanta iyo cadaalada, dhaqanka iyo diinta.
Cidkasta oo madaxnimo raadisa waxay ay kursiga ku gaadhi kartaa codka ugu badan ee bulshada somaliland oo inta badan ku codeeya hab reeraysan; mar haduu sidaa iskaga badanyahay xaalku gar iyo daw waxa ah; ( nidaamka jeegaamaysiga siyaasada oo ah iskaashi beeleed hab siyaasiya ).
Jeegaantu sideedaba waxa ay ka koobantahay 7 midab oo ay saddex muuqdaan; qof ahaan waxa aan aragti bidayaa in siyaasada dalku u qaabeysanto guud ahaan ( two teams of policy players ) 2 kooxood oo mid kiiba ka kooban yahay 3dex beelood oo waaweyn tusaale ( reer awdal oo isku dhan + habar awal + habar jeclo VS all arab + garxajis+ harti) ama all reer awdal + arab + garxajis VS harti + habar jeclo + habar awal). koox kasta oo badisaaba ay ku guuleystaan talada dalka, qaybsiga madaxweyne iyo madaxweyne xigeen.